Ndị a bụ ndị kacha mma Amazon Prime Day amụọ | Akụkọ akụrụngwa
Taa Tuesday July 12 Amazon na-agba ụbọchị ncheta ụbọchị gburugburu ụwa,, nke anyị na-adọ gị aka ná ntị na ị ghaghị ịkwadebe kaadị akwụmụgwọ iji zụta ọtụtụ ihe ga-enwe nnukwu ego. Na mkpokọta, ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri awade na ihe kariri uzo iri abuo. Offọdụ n'ime ha ga-adịgide adịgide kwa ụbọchị, nke ị nwere ike ịhụ n'isiokwu a, ndị ọzọ ga-acha ọkụ, n'ihi ya ị kwesịrị ịdị ngwa ngwa mgbe ị na-azụ.
Nke a bụ oge nke abụọ Amazon na-eme emume a, nke, dị ka anyị ga-akọwa n'okpuru, ga-enweta ndị ọrụ niile edebanyere aha ha. Ọrụ adịchaghị Amazon.
1 Kedu ihe bụ Amazon Prime Day?
2 Kedụ ka m ga - esi azụta ihe n’ụbọchị Amazon Premium?
3 Otu esi enweta "ichu nta" maka ahia kacha mma
4 Onyinye ga-adị ụbọchị niile
4.2 Desktọpụ na Laptọọpụ
4.3 Ndị kamera
4.4 Audio na vidiyo
4.6 Ngwa komputa na ndi ozo
4.7 Egwuregwu vidiyo na njikwa
4.8 Ngwa ụlọ
5 Enyemaka Flash
Kedu ihe bụ Amazon Prime Day?
Amazon Prime Day bụ otu n'ime ọtụtụ ụbọchị mgbe Amazon na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa na ọnụahịa belata. A na-enye ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a site na nnukwu ụlọ ahịa na-echekwa ụbọchị niile na ndị ọzọ na-enye ha n'oge oge akọwapụtara nke ọma.
Edebere ụbọchị a maka naanị ndị ọrụ e debanyere aha na ọrụ Amazon Premium, na oge a ọ ga-adịrị ndị bi na Spain, United States, United Kingdom, Japan, Italy, Germany, France, Canada, Belgium ma ọ bụ Austria. Mbipụta nke afọ gara aga ghọrọ ụbọchị nwere ahịa kachasị elu n'ụwa niile, yana iwu 398 kwa nke abụọ, ọbụnadị karịa ahịa ndị emere n'oge Black Friday a ma ama.
Amazon emebeghị amụma ọ bụla na ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa, ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ha nwere olile anya gafere ndekọ nke afọ gara aga, bụ ebe ahịa bụ nde mmadụ gburugburu ụwa.
Kedụ ka m ga - esi azụta ihe n’ụbọchị Amazon Premium?
Dika anyi kwurula iji nwee ike inweta ufodu ihe ewepu ego n’oge ubochi a, anyi aghaghi ibu ndi debanyere aha nke Amazon Premium ma ọ bụ mee ka ndenye aha rụọ ọrụ ụbọchị niile. Iji mee ka ọ dị mfe maka gị, Amazon na-enye ọnwa nnwale n'efu nke ọrụ ya naanị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ n'oge Amazon adịchaghị Day ị ga-eme ka ndenye aha wee mee ka gị zụọ. Naanị otu ọnwa mgbe e mesịrị, ya bụ, na August 12, ị ga-ekpebi ma ị ga-eme ndenye aha gị ma ọ bụ kagbuo ya.
Otu esi enweta "ichu nta" maka ahia kacha mma
Amazon Prime Day ga-ejupụta site na mmalite ruo na njedebe na azụmahịa na-akpali akpali na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe. Chụ nta onyinye kachasị mma ga-adị mfe, dịka ọmụmaatụ, na ihe ndị a ga-ere ahịa ụbọchị niile, yana ọ ga-adịtụ mgbagwoju anya na onyinye ndị ga-adịru oge. Ghara ichefu otu onyinye, anyị ga-agwa gị ndụmọdụ ole na ole.
Nke mbụ You pụrụ ịhụ ihe niile na-enye maka Prime Day a site na ngalaba pụrụ iche nke Amazon kwadebere na weebụsaịtị ya. Dịka anyị gwara gị, a ga-enwe onyinye na-adịgide adịgide ụbọchị niile ma a ga-enwe ndị ọzọ a ga-agbanwe n'oge oge. A ga-ebipụta onyinye ndị a na nkeji 5 ọ bụla na oge ha ga-adị iche iche dabere n’edemede nke ọ bụla. Anyị ga-ebipụta ụfọdụ azụmaahịa kachasị mma na edemede a ka ị nwee ike iji ha mee ihe.
Ihe ndị nwere ire ere nwere ụfọdụ ngwaahịa ya mere ọ bụrụ na enwere mpaghara ndị dịnụ ị nwere ike ịzụta ya n'enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na ọnụego adịghịzi, ị nwere ike ịdebanye aha na listi echere, ọ bụrụ na ngwaahịa a dị ọhụrụ ma ọ bụ Amazon kpebiri ịmalite mpaghara karịa na ọnụahịa mbelata ahụ.
Na mkpokọta, anyị nwere ike ikwu na iji nweta ihe ahụ ịchọrọ nke ukwuu, na ọnụahịa mbelata, ị ga-abụrịrị ịenta ntị nke ọma ma dịrị ọsọ ọsọ mgbe ị na-azụ ihe na Amazon Prime Day.
Onyinye ga-adị ụbọchị niile
N'okpuru ebe a, anyị na-egosi gị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke onyinye ga-adị kwa ụbọchị;
Samsung Gear S2 Classic adịchaghị
Weimei ùkwù (Ekwentị + Smartwach + iko VR)
Sony Smartwatch 3 Omuma
Desktọpụ na Laptọọpụ
VicTsing edinam igwefoto
Fujifilm ngwa ngwa Obere 70
GoPro HERO Oge + kaadị ebe nchekwa
Olympus 10 × 50 DPS-M - Ihe nyocha
Tamron AF 16-300 mm - Anya maka Canon
Tamron AF 16-300 mm - Anya maka Nikon
Audio na vidiyo
Bose SoundSport - Egwuregwu ekweisi
Logitech UE ọganihu 2
Kindle Akwụkwọ ọcha 3G
Ngwa komputa na ndi ozo
Dragontouch 10.6 ”mbadamba
MX300 dị mkpa - 750 GB SSD diski
Logitech C920 HD Pro - Igwefoto weebụ HD zuru ezu
Logitech G29 - Ntuziaka maka PS4, PS3 na PC
Logitech K400 Gụnyere - Ikuku kiiboodu
SanDisk 64GB kaadị ebe nchekwa
Sandisk Ultra Kwesịrị Ekwesị - 3.0GB USB 64 Flash Draịvụ
Egwuregwu vidiyo na njikwa
PlayStation 4 (PS4) - 500GB Console + Uncharted 4 + Onye Ikpeazụ Anyị
PlayStation 4 (PS4) 500GB Refurbish + Agbakwunyere Onye Njikwa DS4 Ọzọ
CoD nke Atọ
4 + DS4 a na-akwụghị ụgwọ
Taurus nri robot
Polti Forzaspira MC330 Turbo - Oru oma bagless multi-cyclonic agụụ Cleaner
Rowenta DG8960 ịgbachi nkịtị Steam Eco - Ogwe aka mgbaze
N'okpuru ebe a, ị ga - ahụ ụfọdụ onyinye ngosi ọkụ nke Amazon ga - enye anyị na ụbọchị izizi.
Acer Predator AG3-605 - Kọmputa desktọọpụ (site na 00: 00 ruo 23: 59 awa)
ASUS RT-AC3200 - AC3200 Tri-gbalaga Ikuku rawụta (Site na 00:00 ruo 08:25 XNUMX)
BenQ XL2730Z - 27 ″ LED Monitor (Site na 00:00 ruo 08:25 XNUMX)
Delonghi Stelia kọfị onye na-eme kọfị + 2 Ngwunye kọfị kọfị (Site na 00:00 ruo 08:35 XNUMX)
Corsair Obsidian 750D - Akụrụngwa Kọmputa (Site na 00:00 ruo 08:25 XNUMX)
Njikere ịzụta na-enweghị nkwụsị na Amazon Prime Day echere ogologo oge?. Gwa anyị ihe ị zụtara na oghere echekwara maka nkọwa na post a ma ọ bụ site na otu n'ime netwọk mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Amazon » Ndị a bụ ndị kacha mma Amazon Prime Day amụọ
Ugbu a dị Samsung Galaxy J2 (2016) Smart Glow